प्रहरी कि साहित्यकार ? - लाइफ स्टाइल - साप्ताहिक
प्रहरी कि साहित्यकार ?
भाद्र १३, २०७१
शारीरिक तन्दुरुस्ती स्वस्थ प्रहरीको पहिचान हो, अनि कलात्मक लेखक उत्कृष्ट साहित्यकारको परिचय। कथाकार महेशविक्रम शाह जति तन्तुरुस्तीमा विश्वास राख्छन्, त्यति नै कलात्मक लेखनमा। कहिलेकाहीँ उनको व्यक्तित्वमा अचम्मको विरोधाभास देखिन्छ। प्रहरी सेवामा २५ वर्ष बिताइसकेका शाह वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक हुन्। तैपनि प्रहरी प्रशासनमा उनको साहित्यिक व्यक्तित्वको बढी चर्चा हुन्छ। ६ वटा कथा-संग्रहको प्रकाशनसँगै प्रतिष्ठित मदन पुरस्कार पाइसकेका शाहलाई कहिलेकाहीँ प्रहरी व्यक्तित्वका कारण साहित्यिक रमझममा रम्ने अवसर प्राप्त हुँदैन। आफ्नो सेवाको आधाभन्दा बढी समय अपराध अनुसन्धान एवं प्रहरी तालिम कक्षामा बिताएका शाह कहिलेकाहीँ गम खान्छन्— म साहित्यकार बढी हुँ कि उच्च प्रहरी अधिकृत ?
प्रहरी सेवाका क्रममा देशका विभिन्न स्थान घुम्दा उनले कथाका धेरै प्लट भेट्टाए। विश्वका ५ महादेशका २५ देशको भ्रमण, नेपालका धेरै गाउँ-ठाउँका पात्र तथा माओवादी द्वन्द्वका सबै पाटो देखेका शाहलाई कथाको बनोट बनाउन त्यसले पर्याप्त सहयोग गर्‍यो। त्यसैले पनि उनी प्रहरी संगठनले आफूलाई धेरै कुरा दिएको महसुस गर्छन्। भावुक साहित्यकार भएका नाताले उनी कुनै घटनाको अनुसन्धान गर्दा र प्रहरीलाई त्यससम्बन्धी तालिम दिँदा पात्रको मनोविज्ञानको तहसम्म पुग्ने र पुर्‍याउने प्रयास गर्छन्, फलस्वरूप उनी नेपालका अब्बल दर्जाका प्रहरी अनुसन्धानकर्ता पनि मानिन्छन्। 'कथाकार महेशले प्रहरी फोर्सभित्र नरम, सहनशील एवं गम्भीर अध्ययनशील प्रहरी पनि हुन्छन् भन्ने कुरा स्थापित गर्‍यो।' शाह भन्छन्, 'यता प्रहरी महेशका कारण नेपाली साहित्यले धेरै पात्र र परिवेश देख्न पायो। प्रहरी संगठनभित्र कथाकार महेश नभएको भए, उसको कथामा यति धेरै विविधता हुने थिएन।'
हुन पनि उनको पछिल्लो कथा-संग्रह 'ज्याक्सन हाइट' का सबै कथा विदेशी पात्र र परिवेशमा केन्दि्रत छन्। नेपाली साहित्यमा यो सर्वथा नौलो प्रयोग हो। विश्वका २५ देशका मानिसहरूको कथा लेख्दा शाहले त्यसलाई नेपाली मनले महसुस गर्न सक्ने बनाएका छन्। उनले द्वन्द्वसँग सम्बन्धित काठमाडौंमा कमरेड, सिपाहीकी श्रीमती, छापामारको छोरोजस्ता फरक दृष्टिकोणका तीन कथा-संग्रह सार्वजनिक गरे। त्यस्तै सटाहाजस्ता कथा-संग्रहमा उनले यसअघि नलेखिएका नेपाली समाजका कुरा बाहिर ल्याए। उनले कथा लेख्न थालेको पनि २५ वर्ष नै भएछ। यद्यपि प्रहरी संगठनमा छिर्नुअघि नै कविता लेख्न थालेकाले महेश साहित्यलाई प्रहरीभन्दा जेठो महसुस गर्छन्।
महेशविक्रम शाह बिहान ५ बजे उठ्छन्। दैनिक ७ किलोमिटर दगुर्ने, घर फर्केर प्राणायाम र योग गर्ने शाह शुद्ध शाकाहारी खाना खान्छन्। चुरोट, मदिरा र बाहिरी स्त्रीको संगत उनका लागि वर्जित छन्। यही दैनिकीका कारण महेश उमेरभन्दा १० वर्ष कान्छा देखिन्छन्। 'सात्विक खाना र व्यवस्थित दैनिकीको असर मानिसको उमेर र व्यक्तित्वमा पनि पर्दो रहेछ।' १२ वर्षको सात्विक जीवनशैलीको अनुभवका आधारमा महेश भन्छन्, 'मान्छेले भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने कुराको आधार नै वर्तमान जीवन कसरी बाँच्ने भन्नेमा निर्भर हुँदो रहेछ।' उनी पदयात्रा, भ्रमण एवं फोटोग्राफीका सौखिन हुन्। उनले लेखेको 'फोटोग्राफी' शीर्षकको पुस्तक नेपाली भाषामा लेखिएको फोटोग्राफीसम्बन्धी पहिलो पुस्तक हो। उक्त पुस्तक पत्रकारिता तथा आमसञ्चारका विद्यार्थीहरूको पाठ्य पुस्तक पनि हो।
पदयात्राका सौखिन भएकाले उनी नेपालका धेरैजसो पदमार्ग हिँडेका छन्। 'विदेशीहरू नेपाल किन आउँछन् भन्ने कुरा पदयात्रा गरेपछि थाहा पाइने रहेछ।' पदयात्राकै विषयमा घन्टौं गफिन सक्ने महेशले भने, 'संसारमा नेपालजस्तो सुन्दर देश अरू छैन। नेपाली भएको नाताले मैले यो कुरा भनेको होइन, संसारका धेरै देश घुमिसकेपछि निकालेको निष्कर्ष हो।' शाहको विचारमा भौतिक विकासका क्रममा धेरै देशलाई सुन्दर बनाइएको छ, तर नेपालको प्राकृतिक विविधता, हावापानी एवं त्यसको सौन्दर्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अर्को देश संसारमा कतै छैन।
शाह दुई छोराका पिता हुन्। उनका हजुरबुबाबाट दुई छोरा भएका थिए। ती दुई सन्तानले पनि दुई छोरा नै जन्माए। उनका भाइका पनि दुई छोरा छन्। 'मेरो जीवनमा दुईले ठूलो भूमिका खेलेको छ। अब दुईवटा उपन्यास लेखेर परम्परादेखि आएको दुई अंकलाई साहित्यमा पनि प्रयोग गरौं जस्तो लाग्दैछ।' यति भनिसकेर महेश खुलेर हाँसे। उनी हाँस्दा लाग्छ उनमा कुनै तनाव छैन। भएका तनाव जति उनी लेखेरै निखार्छन्।
ग्याजेट : क्यानोन क्यामेरा, सामसुङको लेटेस्ट मोबाइल
सदावहार पुस्तक : भानुभक्तको रामायण
साहित्यकार : बीपी कोइराला, रमेश विकल
मनपर्ने देश : नेपाल, स्विट्जरल्यान्ड
फुर्सद : पदयात्रा र भ्रमण
प्रकाशित :भाद्र १३, २०७१
किशोर पहाडी, साहित्यकार
उषा शेरचन, कवयित्री/साहित्यकार
सेलिब्रेटी फेसन : शारदा शर्मा, साहित्यकार
युवाहरूका लागि ग्रुमिङ रुल्स आश्विन १३, २०७५